Jesosy: Ilay Mpanadio - Church of God of Switzerland Switzerland
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Jesosy: Ilay mpanadio
Ny fanadiovana ivelany dia tsy mampiova ny fontsika! Mety mieritreritra indroa ny amin'ny fanitsakitsaham-bady ny olona, ​​saingy ho gaga amin'ny eritreritra ny tsy handro avy eo. Ny halatra dia raharaha madinidinika, saingy matahotra izy ireo rehefa alikan'ny alika. Manana fitsipika momba ny fomba hitsofana ny oronao izy ireo, ny fomba fanadiovana ny tenanao, izay biby tokony hialana, ary ireo fombafomba hamerenana amin'ny laoniny ny fanekeny. Mampianatra ny kolontsaina fa misy zavatra manafintohina ny fihetseham-po sasany - maharikoriko - ary tsy mora ny milaza amin'ireo olona ireo fa tsy mampidi-doza izy ireo.
Mifamadika ny fahadiovan'i Jesosy
Be dia be ny zavatra resahin’ny Baiboly momba ny fahadiovan’ny fombafomba. Ny fombafomba ivelany dia mety hahatonga ny olona ho madio ivelany, toy ny ataontsika ao amin’ny Hebreo 9,13 vakio, fa Jesosy ihany no afaka manadio antsika ao anaty. Alao sary an-tsaina izany, alaivo sary an-tsaina ny efitrano maizina iray. Asio jiro ao ary ny efitrano manontolo dia ho feno hazavana - "sitrana" tamin'ny haizina. Torak’izany koa, tonga tao amin’ny nofon’olombelona tahaka an’i Jesosy Andriamanitra mba hanadio antsika avy ao anaty. Ny fahalotoana ara-pivavahana dia heverina ho mifindra amin'ny ankapobeny - raha mikasika olona maloto ianao dia lasa maloto koa. Ho an’i Jesosy anefa dia nifanohitra tamin’izany ny fiasan’izany: nifindra ny fahadiovany, toy ny nanosika ny haizina ny mazava. Afaka nikasika ny boka i Jesosy ary tsy voan’izy ireo, fa nanasitrana sy nanadio azy ireo. Toy izany koa no ataony amintsika - esoriny eo amin’ny fiainantsika ny fombafomba sy ny fahalotoana ara-pitondrantena. Rehefa mikasika antsika i Jesosy dia madio mandrakizay ny fitondran-tena sy ny fombafomba. Ny batisa dia fombafomba maneho izany zava-misy izany - fombafomba izay atao indray mandeha eo amin'ny fiainana.
Vaovao amin'i Kristy
Ao amin'ny kolontsaina iray izay mifantoka amin'ny fahadiovana fombafomba, ny olona dia tsy manana fanantenana ny hamaha ny olany. Moa ve izany tsy mihatra amin'ny kolontsaina mifantoka amin'ny fanaovana fiainana mendrika amin'ny alàlan'ny fitiavan-karena sy ny fitiavan-tena? Amin'ny alàlan'ny fahasoavana ihany no ho voavonjy ny olona ao amin'ny kolontsaina rehetra - ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fandefany ny Zanany hanohitra ny fandotoana miaraka amin'ny mpandoto mahery sy hitondra fahatanterahany marina amin'ny alàlan'ny herin'ny fitiavany. Afaka mitarika olona mankany amin'ny Mpanavotra izay manadio azy ireo isika ary tia azy ireo. Nandresy ny tenany Izy, ny fomba mahatonga ny fahapotehana lehibe indrindra. Ary nitsangana izy ary nampisatrohaka ny fiainan'olombelona tamin'ny dikany sy fiadanana mandrakizay.
Ho an'ny olona mahatsapa maloto, dia nanolotra fanadiovana i Jesosy.
Manome voninahitra ny olona mahatsiaro menatra izy.
Manome famelan-keloka amin'ny olona mahatsapa izy ireo fa tsy maintsy andoavana ny trosa. Manolotra fampihavanana amin'ireo olona mahatsapa fa tafasaraka izy.
Ho an'ny olona mahatsiaro ho andevo dia manome fahafahana izy.
Ho an'ireo izay mahatsapa fa tsy anisan'izy ireo, dia manolotra fananganan'anaka amin'ny fianakaviany maharitra izy.
Ho an'ireo mahatsapa reraka, dia manome fitsaharana izany.
Ho an'ireo izay manahy dia omena fandriampahalemana izy.
Ny ritual dia manolotra ny filana miverimberina foana. Ny faniriana ara-nofo fotsiny no manome ny faniriana mafy bebe kokoa. Mahafantatra olona mila an'i Kristy ve ianao? Misy zavatra azonao atao ve momba izany? Ity no zavatra tokony hoeritreretina.